SAMOTALIS: Shirkii Ururka TOL Uga Socday Boorama oo Ku Dhamaaday Is Afgaranwaa
Shirkii Ururka TOL Uga Socday Boorama oo Ku Dhamaaday Is Afgaranwaa
Shirkii Ururka TOL Uga Socday Boorama oo Ku Dhamaaday Is Afgaranwaa, Ka Dib Markii Go’aanadisii Dib Loo Dhigay In La Shaaciyo Iyo Salaadiin Ka Dareertay!-HAATUF
Shirkii aadka loogu muransanaa ee maalmahan uga socday koox qurbajoog reer Awdal/Salal iyo Gabiley isku magacawday iyo qaar ka mid ah Saladiinta dhaqanka Awdal iyo culima’udiin ayaa habeenkii xalay ku dhamaaday is Afgaranwaa, ka dib markii gudoomiyihii shirka watay uu sheegay in go’aamada shirka lagu gaadhay uu dib u soo daabici doono sida uu sheegay Yuusuf Qaalib “Waxaan rajaynayaa in wax walba oo aan falanqaynay la sii wadi doono iyada oo dantu tahay in la soo saaro wax aayaha dambe ee umadan anfacaya”.
Shirkan ayaa waxa ka maqnaa Salaadiinta waaweyn ee dhaqanka qaarkood, Xildhibaanda golayaasha Baarlamaanka iyo guurtida kaga Jira beelaha Makaahiil ee Samaroon iyo Aqoonayahano ka mid ah kuwii Aasaasay ururkan Tol leadership Council (TLC).
Suldaan Saleebaan oo hadalkiisa sii wataa waxa uu yidhi “Inamada qurbaha ka yimid waxay joogaan dhulkoodii, wixiise ay ka taliyeen wali mahayno, ee ama wax muuqda na soo hordhiga”. Suldaan Saleebaan ayaa markii uu intaasi sheegay Albaabka ka soo baxay, kana baxay shirkaasi ururka TLC.
Dhanka kalana waxaa jiray xubno salaadiin ah oo iyagu soo dhaweeyay shirkan waxaana ka mid ahaa Suldaan Ibraahim Jaamac Samatar iyo Suldaan C/raxmaan Dhawal waxaana hadaladoodii ka mid ahaa Sul. Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal oo hadalka qaatay ayaa mahadnaq guud bixiyay waxana uu intaasi raaciyay “Boorama maalin laguma dhisin, waxa halkan lagu hayaa waa talo hormar iyo waaltinimo lagu doonayay, waan joogay intii uu socday shirku, waxaanay ila tahay in loo bilaabay sidii ugu fiicnayd, waxan u mahadnaqayaa dhamaan inta waday shirkan”.
Sul. Ibraahim Jaamac Samatar oo hadalka qaatay ayaa u mahadnaqay ka soo qaybgalayaasha iyo masuuliyiinta TOL waxana uu yidhi “ Mid waa in la fahmaa, waxa halkaasi ku qoran Shirwaynihii wada tashiga ee TOL, nin wax yeedhinayaa ma jiro arintu waa wax aan is waydiino.
Gudoomiayaha shirka TOL Yuusuf Aadan Qaalib ayaa micneeyay shahaadadan iyo waxa uu ku mutaystay waxana uu yidhi “Waxa loogu magac daray shaadadan Abwaan Xasan Sh. Muumin AHUN, waxa uu abwaanku ahaa mid taarikhda fanka si wayn ugu abtirsada, Waxa uu ahaa ninkii ugu horeeyay ee sameeya ruwaayad lagu tarjumo ingiriisi.
Shirkan ayaa si weyn indhaha loogu hayay waxa ka soo bixi doona, waxaana la filayay in uu noqdo mid u soo bandhiga bulshada danaynaysay hadafkiisa iyo himiladiisa uu higsanayo, waxaana dad badan shiki ku Abuuray markii ay maqleen in shirka ay ku tashanayaan dad 3 dal xuduudahood kala degen, taas oo aan weli Afrikaba ka dhicin. Ururkan TLCna qorshihiisa ahaa.
Waxaana laga baqayaa in Shirkani noqdo Ayax teg Eela Reeb, hadaan midnimo guud ka iman qurbajooga ADAL ee qurbaha ka imanaya ee inta isku gobol ama meel wada joogtaaba Arin ay ku heshiin waayeen ay u soo tahriibinayaan dalka gudihiisa ee bulshada gudaha khalkhalka ku Abuuraysa.